Mid kamid xiddigaha ugu saamaynta badan United oo galaya,,, - Jubbaland TV
By admin October 11, 2018 116
Cayaariyahan Jesse Lingard ayaa bilaabay in Kooxda Manchester United uu kala hadlo qandaraas kor dhin
Xiddiga heerka Caalami ee Wadanka England oo 25-sano jir ah ayaa dhawaan saxiixay hishiis cusub, balse hada sugaya in uu mar kale qalinka ku duugo qandaraas mudo dheer.
United-ka ayaa toddobaad walba siisa lacag dhan Cayaariyahan Lingard aduun dhan £100,000-kun, kadib markii uu saxiixay qandaraas Afar sano ah sanad Ciyaareedkii 2017-kii.
Kooxda ugu guulaha badan England ayaa ku fekeraysa in ay sii haysto saxiixyadeeda kala Lingard, Ander Herrera, Juan Mata iyo Luke Shaw, ku waas oo ku jira hishiiskoodii u danbeeyay ee Old Trafford, sida lagu daabacay Jariirada The Metro .
Lingard ayaa xilli Ciyaareekii lasoo dhaafay u dhaliyay Kooxda United 13-goal dhamaan tartamada oo dhan.
Si kastaba ha ahaatee’ Lingard ayaa ka mid ah Xiddigaha ugu saamaynta badan Kooxda Old Trafford, kaddib markii uu qayb ka noqday shaxdii Gareth Southgate ee Ciyaarihii World Cup-ka.
The post Mid kamid xiddigaha ugu saamaynta badan United oo galaya,,, appeared first on Goolasha.live.
Taageerayasha Kooxda Banadir Sports Club Oo Niyada Loo Qaboojiyay Kadib…………..